Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Tifitra mahatsiravina tany Tanzania: maty ny Gunman
Vaovao Mafana • Crime • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Gunman any Tanzania
Ny polisy tanzania dia nitifitra ary namono lehilahy iray mpitondra basy izay nino fa avy any Somali izy nitifitra ny polisy polisy es-esam Salaam taorian'ny nitifiran'ny lehilahy ary nahafaty polisy roa tamina tranga nahatsiravina androany.
Ny Masoivohon'i Etazonia ao Tanzania dia namoaka fampitandremana ho an'ny olom-pirenena amerikana ao amin'ny firenena noho ny fitifirana tany Dar es Salaam.
Ny fitifirana dia nitranga teny akaikin'ny Masoivoho frantsay izay misy ihany koa ireo masoivoho Japoney, Kenya, ary Rosiana ary koa andrim-panjakana ara-bola.
Tsy fantatra hatreto ny antony nitifiran'ny nitifitra azy.
Namoaka fampitandremana ny masoivohon'i Etazonia ao Tanzania ho an'ny olom-pirenena amerikana mba mailo hatrany rehefa mitondra fiara amin'ny faritra maro ao amin'ny renivohitra ara-barotra Tanzania. Ny masoivoho amerikana dia nanentana ny olom-pireneny mba “Aza avela ny faritra ary manara-maso fampahalalam-baovao eo an-toerana raha mila vaovao.”
Ilay mpanafika tsy fantatra izay nirongatra fitifirana tao amin'ny renivohitra ara-barotra Tanzania ao Dar es Salaam, dia nitifitra polisy 2 tamina lalana be olona indrindra teo akaikin'ny Masoivohon'i Etazonia teo aloha tany Tanzania.
Tany amin'ny làlambe Ali Hassan Mwinyi akaikin'ny Tetezana Selander no nitrangan'ny fitifirana, ny tolakandro, fotoana atsy Afrika Atsinanana.
Ireo mpamily sy mpandeha natahotra no nandao ny fiarany ka nihazakazaka namonjy ny ainy, hoy ny mpanao gazety teny an-toerana.
Nanodidina ilay lehilahy ny polisy ary nitifitra azy teny akaikin'ny Masoivoho frantsay izay hita ao amin'ilay faritra.
Io faritra io ihany koa no fonenan'ny mponina sy ny biraon'ny iraka vahiny anisan'izany ny masoivoho japoney, kenyan ary rosiana, ary eo akaikin'ny andrim-bola toa an'i KCB Bank any Kenya sy Stanbic Bank any Afrika Atsimo.
Polisy sy tompon'andraikitra amin'ny fiarovana any Tanzania Mbola hanambara ny antony nahatonga ny fanafihana tamin'ny mitataovovonana.
Ireo mpampiasa lalana amin'ny faritry Oysterbay sy Upanga milamina matetika dia voatery nandao ny fiarany rehefa nihazakazaka namonjy ny ainy izy ireo.
Ny horonantsary nalefa tao amin'ny media sosialy dia nampiseho ny fihetsiky ny polisy niarahan'ny polisy nanafika ilay nahavanon-doza talohan'ny nitifirany azy teo afovoan'ny arabe ivelan'ny vavahadin'ny Masoivoho frantsay.
Ireo nanatri-maso izay tonga teny an-toerana dia nilaza fa mety nahafaty olon-tsotra vitsivitsy ilay nanafika azy nandritra ny fitifirana.
Ny fampandrenesana ofisialy ofisialy avy amin'ny masoivoho amerikana dia mivaky toy izao:
Fampandrenesana fiarovana - Masoivohon'i Etazonia Dar es Salaam, 25 aogositra 2021
Location: Faritra akaikin'ny masoivoho frantsay amin'ny làlana Ali Hassan Mwinyi, Dar es Salaam, Tanzania
Zava-nitranga: Fihaonana mitam-piadiana akaikin'ny Masoivohon'i Frantsa.
Misy ny tatitra momba ny fihaonana mitam-piadiana manakaiky ny masoivoho frantsay amin'ny làlana Ali Hassan Mwinyi.
Hetsika tokony horaisina:
Ny olom-pirenena amerikana sy ny mpiasan'ny governemanta amerikana dia atoro hevitra mba hisoroka ny faritra.